Ny torolàlana an'ny mpivarotra amin'ny SoLoMo | Martech Zone
Ny torolàlana an'ny mpivarotra ho an'ny SoLoMo
Alakamisy 1, 2012 Alarobia, Oktobra 31, 2012 Douglas Karr
Fiaraha-monina, eo an-toerana, finday. Ny solonanarana amin'izany dia ny SoLoMo ary paikady iray ahazoana fitomboana lehibe eo amin'ny sehatry ny indostria. Mandrisika ny fifamoivoizana amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana sy fizarana ny fiasa ara-tsosialy, ny hetsika ataon'ny mpampiasa eo an-toerana raha mitady ny mpivarotra any amin'ny faritra misy azy ireo ny mpampiasa, ary ny finday kosa no mitondra ny fanapahan-kevitry ny fividianana entana sy ivelan'ny toerana fivarotana.
Na dia ambany aza ny tahan'ny fanovana fivarotana antsinjarany ho an'ireo mpampiasa finday avo lenta, ireo antontan'isa ireo dia tsy mitantara ny zava-misy rehetra, satria ny fitaovan'ny finday dia misy akony lehibe amin'ny fanapahan-kevitry ny fividianana fivarotana sy amin'ny Internet. Avy amin'ny Monetate's Infographic: Ny lisitry ny mpivarotra ho an'ny SoLoMo
Ity infographic ity dia manome ny antontan'isa manohana an'ireo mpivarotra am-bidy fa ny fampiasam-bola amin'ny finday, fampiharana finday, serivisy toerana, fikarohana eo an-toerana ary fampidirana ara-tsosialy dia fotoana lehibe handefasana dolara bebe kokoa ho eo am-baravarany.
Tags: efa-joro sokeraSary torohayan-toeranaserivisy toeranaFivarotana finday sy tablettempaninjaraeo an-toeranaSocial Media Marketingsolomo
Ny fanjakan'ny fiaraha-miasa an-tserasera
Ny Anatomy an'ny Executive Marketing